ပုံပြင်ဖတ်ပြနေတဲ့ ပုံပြင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ပုံပြင်ဖတ်ပြနေတဲ့ ပုံပြင်	8
Posted by Thint Aye Yeik on Jan 23, 2016 in Creative Writing, My Dear Diary, Poetry | 8 comments
အခုတလော… အမှောင်မိုးစက်တွေ ခပ်စပ်စပ်လေး ရွာချတတ်လို့…. ကိုယ်ပေါ်ကအလင်းတွေကို မကြာခဏ သပ်ချပေးနေရတယ်။ သိပ်တော့ မခက်ပါဘူး။ တစ်ခြမ်းပဲရှိတဲ့ လမင်းကို ငါးမျှားချိတ်နဲ့ လှမ်းဆွဲရသလောက်ပေါ့…
မိ ပါတယ်… တချိန်မှာ လွတ်ထွက်သွားဖို့အတွက် ဆိုပါတော့…။ —————————————————————-
တောင်ပေါ်သား says: ဇွန်လ ၂၃ ရက်မှာ ရေးမယ့်ကဗျာထင်တယ်
သင့်အရိပ် says: ဟုတ်ပါ့… jan နဲ့ မှားရေးတာ… ။
.မောဒ့်မော့ဒ် တွေ ပြင်ပေးကြပါအုန်းဗျို့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6346
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: ခုတလော
အီးပါရင်း ချွေးစက်တွေကို မကြာခဏ
တစ်တုံးပဲထွက်တဲ့ အီးတုံးကို ငါးမျှားချိတ်နဲ့
တချိန်မှာ ဘက်ဖိုးနဲ့ ယက်ထုတ်ဖို့အတွက်
သင့်အရိပ် says: ထညားရဲ့ ကဗျာကြီးက နံလိုက်ထာ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ခင်ဇော် says: မိတယ် ဆိုတာ
တစ်ချိန်မှာ လွတ်ထွက်ဖို့ လို့ တွေးရင်
သင့်အရိပ် says: အဲ့လိုလေး တွေးမိတော့လည်း
အောင် မိုးသူ says: တစ်ခြမ်းပဲရှိတဲ့ လမင်းကို ငါးမျှားချိတ်နဲ့ လှမ်းဆွဲရသလောက်ပေါ့…
တချိန်မှာ လွတ်ထွက်သွားဖို့အတွက် ဆိုပါတော့…။
သင့်အရိပ် says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.